Nnukwu Hadron Collider, nke GNU / Linux kwadoro. Site na Linux
Nnukwu Hadron Collider, nke GNU / Linux kwadoro
Yesnyaahụ, ndị ọkà mmụta sayensị sitere na European Organization for Nuclear Physics (CERN, maka acronym ya n'asụsụ Bekee) ha kuru ogidi proton abuo na ihe ngwangwa nke etinyere na Geneva, na-enwe olileanya inweta azịza nye ọtụtụ ihe ndị a na-amaghị ama n’eluigwe na ụwa. Nke a, ihe kacha mkpa n'ihe gbasara physics nke oge a, Large Hadron Collider (LHC, Large Hadron Collider), ruru ijeri dọla 10 ma gafee afọ 20 ọ were wuo ya na onyinye nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị na-agụ kpakpando nke ụwa, chọrọ ihe ọzọ iji mee ka ọ rụọ ọrụ: GNU / Linux.
CERN, nzukọ na-ahụ maka ọrụ LHC, na-eji ihe a maara dị ka Linux sayensị, nke na-agba ọsọ na kọmputa n'ofe netwọkụ nke mejupụtara ike ihe dị ka 100 CPUs na ihe dị ka 15 petabytes nke data kwa afọ.
CERN n'onwe ya nwere ntakịrị ahụmịhe na GNU / Linux, ma na-enye nkwado siri ike maka nkesa Linux Scientific, nke bụ recompiled version nke Uhie okpu Enterprise Linux, yiri CentOS.
Tụle na ike nke LHC zuru ezu iji bibie ụwa, na -emepụta oghere ojii na mbara igwe, ọ bụ ihe nkasi obi ịmara na ụfọdụ n'ime isi ya dị nso na ihe egwu nke ịhụ ihu igwe nke ọnwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Nnukwu Hadron Collider, nke GNU / Linux kwadoro
Enwere ndị nkuzi, m ga-achọ ka ị kọwatụrụ m ntakịrị ihe gbasara HADRONES collider, ọ bụrụ na oghere ojii bụ mkpokọta nke oke n'otu ebe (ebe enweghị ohere ma ọ bụ na ọ na-agbanwe agbanwe), ajụjụ m bụ:
1. - Kedụ ka nnukwu oghere ojii ga-esi n'oge ahụ?
2.- Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji wepụta nke a?
3.- Ọ ga - abawanye nha ya ka ọ ga - arụ ọrụ na mbara igwe mgbe niile?
4.- Ego ole ka ọ ga - eke mgbe obere akụkụ ya megidere?
5: _ Anyị ga - ekwu maka ọgbaghara nuklia site na ngwangwa, na na mgbe ha ruru ọsọ ha, ha nwere ike ibute oke mbibi nke ga - eweta nsogbu ihu igwe?
6.- Ọ bụrụ na enwetara ike site na nkwekọrịta a, ọ ga - emetụta oxygen anyị na - ekuru?
Zaghachi Joel Alanis
Ebee ka ha si nweta "ike" nke LHC zuru oke iji bibie ụwa ?????
Chaị! Enweghị echiche ... ezigbo ajụjụ. Enyemaka ọ bụla na Wikipedia?
Eduardo Lev dijo
Oghere ojii nke a ga-eme ga-enwe otu uka (ya mere otu ihe ndọda) nke ihe ndị mepụtara ya. Nke ahụ bụ, obere ihe, pere mpe nke na agaghị enwe ike ịchọpụta. The hadron collider na-arụ ọrụ na ume dị elu karịa ọgbụgba ikuku na-arụ na nuklia nuklia, na ọ naghị eji ihe ọkụkụ eme ihe, yabụ mmeghari nuklia nke ụdị bọmbụ agaghị ekwe omume. Echiche nke LHC abụghị inweta ume, ọ bụ iji tụọ ma hụ otu esi ekerịta ihe ndị ọzọ na ike dị ka nke Big Bang.
Zaghachi Eduardo Lev
Akụkọ a abụghị ihe ọhụụ mana enwere ihe m na-amaghị nke mere na m ga-agwa gị na e chere na onye na-egwu egwu abanye na ihe fọrọ nke nta ka ọ chịkwaa igwe ahụ ma ọ dabara na nke ahụ emeghị n'ebe ahụ, ọ bụghị naanị ife! Ọzọkwa amaghị m na na ọrụ ahụ ha jiri Linux mana hey ... Olileanya na Linux dị oke nchekwa ka ihe ọ bụla ghara ime!
Nkeel Ofel dijo
ọtụtụ sọftụwia m bụ n'efu, na ekele microes's "impeccable courtesy" (adighi achu ichu nta), a karịrị m ọrịa ha, ana m agagharị na Linux.
Zaghachi Ofelia Pérez
Imepụta ime ụlọ na 3D Home dị ụtọ
Hazie Mmanya na Ubi-vine